L'amore vince la fiamma di fuoco "la grave ustione di Vicka" | PREGHIERA&NEWS
Conquhụnanya merie n'ire ọkụ "ọkụ Vicka siri ike"
Paolo Tescione	Edere ya Ọktoba 14, 2020 Ọktoba 14, 2020
Sista Elvira ọdọhọ ete: “Tuesday 26 April. Na kichin nke ụlọ Vicka, nne Vicka hapụrụ ite na mmanụ na stovu; Nwanne nwanyị Vicka, n'amaghị ihe ọ bụla, mụnye stovu ahụ dị ka ọ na-adị, nke mechara mee ka anwụrụ ọkụ wee pụta. Ihe dị ka elekere 13:XNUMX nke ehihie nne na-esi n'èzí abịa, mepee oven, were mmiri tụba ya n'ekwú nke na-ere ọkụ. Ire ọkụ na-abanye n'ụlọ ahụ, na-ere ákwà mgbochi. Vicka, onye ya na ndị ụka ala nsọ na-ekwurịta okwu n’ogige ahụ, gbabara n’ụlọ ahụ wee hụ ka ụmụ ụmụ ya nọ n’anwụrụ ọkụ na n’ọkụ ahụ, tụbara onwe ya n’ime ọkụ ahụ ma kpụrụ ha pụọ. Vicka gbara ihu ya dum na aka ya obere obere. Ka ha na-akpọga ha ụlọọgwụ na Mostar - nwanne ya nwanyị Anna gwara m - Vicka bụrụ, sị: “Maria,,. Maria… ”Na nne kwuru; "Ọ na-agba ara, mana olee otu ọ ga-esi bụrụ abụ?" Ọbụna ndị dọkịta nke Mostar, ndị na-amaghị ebe ha ga-etinye aka ha mgbe ha hụrụ Vicka belatara mana ọ na-amụmụ ọnụ ọchị ma ka na-abụ abụ, kwuru, sị: "Mana nwa agbọghọ a bụ onye nzuzu!".
Mgbe m lere ya anya n’elu akwa ụfụ mgbe ọ laghachisịrị n’ụlọ, Vicka na-agwa m; "Elvira, ọ dị mfe ịbụ abụ mgbe ị dị mma, mana ọ mara mma karịa ịbụ abụ mgbe ị na-ata ahụhụ". N'ụbọchị ndị ahụ, emetụtara m okwukwe nke nwa agbọghọ ahụ n'okwukwe n'oge ahụhụ dị egwu. Vicka anaghị eme mkpesa na obere. Anọrọ m ya nso ruo ụbọchị 8 ma agụọ m ọ joyụ dị ukwuu na ya n'agbanyeghị na nhụjuanya dị ukwuu… Ọ bụ ike nke sitere n'ịhụnanya; n’ezie ọnwu na-eloda ịhụnanya. Ọ fọrọ nke nta ka ihu Vicka dị oji dị ka kol, anya ya adịkwaghị ahụ ya anya, mana ha nọgidere dị ka ntụpọ abụọ, agbanyeghị na-enwu gbaa ma juputa n’ìhè, juputara n’onu ọchị; egbugbere ọnụ ya na-apụta n’ aza aza. Achọpụtabeghị Vicka. Otú ọ dị, ọ dịghị mgbe ọ mere mkpesa. Mbanụ! Ọ fọrọ nke nta ka ọ nwee obi ụtọ inwe ike ịchụrụ Chineke ihe. Ọ gwara m: "Ọ bụ Chineke chọrọ ka ọ dị otu a, na ọ bụ ya". Agwara m ya ọzọ: "... mana gịnị kpatara naanị gị, gịnị kpatara ụbọchị ndị a mgbe anyị nwere obere mmemme ịme gị, nke wee daa mba?!" Ma ọ sịrị: “Elvira, ọ dịghị mkpa. Ọ bụrụ na Ọ chọrọ ya otu a, ọ dị mma. Anaghị m ajụ Onyenwe anyị ihe kpatara ya, n’ihi na Ọ ma ihe dị mma maka m ”. Ọ bụ n'ezie ahụhụ a nakweere n'ịhụnanya.
Ruo otu izu, ọ bandeeji ya niile ihu ma jiri kabeeji na-emeso ya. N'ezie, n'ebe ahụ ka ha na-eji emeso ọkụ dị ka nke a: na ude, nke nwanyị mere agadi mere, sitere na abụba na chopped kabeeji epupụta. Otú ọ dị, ude ahụ rụpụtara ihe ndị magburu onwe ha dị ịtụnanya. Mgbe otu izu m ga-ehicha Vicka ihu, n'ụzọ nkịtị ekpepụsị ya na m ga-asị ya: "Vicka, nke a adịghị njikere ma m ga-sere na agbanyeghị". Na ya: "Nsogbu Nema ... hurry ọsọ ọsọ, ọ bụghị ihe ọjọọ ... don't echegbula." Ekwupụtara m na kama ihu Vicka, ahụrụ m obi ya. Ọ dị m ka m hụrụ nwanyị jupụtara n'ịhụnanya na enwekwaghị m anụ ahụ mgbu. Ọ na-abụkarị, ọ bụrụ n’anwụ na-acha ntakịrị, anyị na - eche - nne m - ihe ụfụ ehihie na abalị. Ọ kpọrọ ọkụ ihu ya dum, aka ya dum na ọkara aka ya, ọ dịghị ihe ọ bụla!
Ka oge na-aga, ndị mmadụ bịara, ha chọrọ ịhụ ya ... Agwara m onwe m: "Vicka agaghị egosi onwe ya otu ahụ n'ihi na ọ dị ka anụ ọhịa" ... Kama nke ahụ, ọ na-ekpuchi anya ya niile, na-agba ọsọ oge niile ọ nụrụ ndị mmadụ. Nwatakịrị nwanyị dị afọ iri abụọ na atọ maara etu esi emeri onwe ya dịka nke a ...
Vicka (Nwanne nwanyị Elvira gara n'ihu) kọọrọ m ụbọchị ahụ, n'oge ngosipụta ahụ, ọ nweghị ike gbuo ikpere n'ala, n'ihi na ọ nọ n'ihe ndina. Mgbe ahu nne anyi di aso putara n'ihu ya, nọdụ n'akụkụ ya, tinye aka ya otua ... n'isi, na-emetụ ya aka ụbọchị ahụ. Nwanyị anyị na Vicka anaghị agwa ibe ha okwu, naanị ha lere anya n'anya na ọ bụ ya, bụ naanị ngosipụta n'ime afọ 7 nke enweghị mkparịta ụka. Ebum n'uche m - Nwanne anyi Elvira kwuru - Nwanyi anyi amaghi ihe mere Chukwu jiri zite ihe a. Echere m na uche Chineke bụ mgbe ụfọdụ a na-ezodị Nwanyị anyị. Ana m achọpụta ya - na-aga n'ihu Sista Elvira - site na nkwupụta nke onye ọhụụ ọhụụ Marija Pavlovic: "Nwanyị anyị kwuru, sị: - Chineke kwere ka m" ... Chineke m kwadoro ... ". Marija kwuru, sị: “Nwanyị anyị na-anọgide na-abịa n’etiti anyị ma na-arịọ Nna ahụ ka ọ gbadata n’ụwa kwa ụbọchị n’ihi na ọ chọrọ ka anyị kwenye na oke ịhụnanya ya, mana karịa ịhụnanya kacha ukwuu Chineke nwere n’ebe anyị nọ. Ọ bụrụ n ’anyị matara - Nwanyị anyị kwuru - otu Chukwu Nna ji hụ anyị n’anya, anyị ga-ebe akwa maka ọ joyụ, a ga-agọzi anyị n’ arụ. Anyị ahụwo a bliss na Vicka - Sista Elvira kwuru - ọ bụ ezie na nke ukwuu mkpagbu. Ee, izi ezi nke ụmụ agbọghọ a gosipụtara n'oge obe, n'oge ikpe.
Nke gara aga Post Gara aga post:Ura nke ubochi: Obe nkpuru na ndu
Next Post → Post ozo:4 ekpere di obula kwesiri ikpe ekpere banyere nwunye ya